सेल्टल्ट 8 मोबाइल SEO मिथकहरू डिस्प्ल गर्दछ
SEO वेबसाइट अनुकूलन को एक महत्वपूर्ण भाग हो। अधिक र अधिक मान्छे संगउनीहरूको स्मार्टफोनहरूमा खोजहरू, मोबाइल वेबमा विस्फोट भएको छ। मोबाइल फोनको लागि SEO पनि एक गर्म विषय हो, तर उदास देखि अधिकांशमोबाइल एसईओ बारेमा जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ तपाई गलत छ।
रस बार्बर, को विशेषज्ञ सेमील्ट डिजिटल सेवाहरू, शीर्ष 8 एसईओ मिथकहरू हटाउँदछ।
मिथक 1: पीसी र मोबाईलमा के गर्ने मान्छेहरूले के खोज्ने हो
सत्य: मानिसहरू हिँडिरहेका छन्, त्यसैले तिनीहरूसँग विस्तृत रिपोर्ट पढ्ने लक्जरी छैन,लामो ब्लग पोष्टहरू र तिनीहरूको मोबाइल उपकरणहरूमा अनुसन्धान निष्कर्षहरू। सामान्यतया, तिनीहरू छिटो उत्तर खोजिरहेका छन्। यो स्वचालित रूपमा भिन्न हुन्छमानिसहरू कुन यन्त्रमा खोज्दैछन्। मानिसहरूको मोबाइल उपकरणहरूमा के खोजी गर्दै हुनुहुन्छ भनेर जाँच गर्न उत्तम तरिका Google प्रयोग गर्न होAdWords। तपाईं व्यक्ति द्वारा टाइप गरिएका कीवर्डको मोबाइल अनुपातमा एक व्यावहारिक रूप प्राप्त गर्न सक्षम हुनुहुनेछ।
मिथक 2: मोबाइल खोजी र पीसी खोजीहरूले पनि यस्तै परिणाम देखाउँछन्
सत्य: खोज ईञ्जिनहरूले यो सजिलो बनाउन सजिलो काम गरिरहेका छन् कि मान्छे को खोज्न को लागीउनीहरूको आवश्यकता हुँदा उनीहरूलाई चाहिन्छ। यसको मतलब छ कि वेबसाईटहरु मोबाइल अनुकूल नगर्ने नतिजाहरु मा उच्च श्रेणी मा नहोला। तपाईंको वेबसाइट अनुकूलित हुन सक्छपीसी को लागी, तर मोबाइल खोज को लागि खराब रैंक गर्न सक्छ। यसकारण, पीसी खोजीहरू र मोबाइल खोजीहरूको नतिजाहरू पूर्ण फरक छन्। Google को अध्ययनयो कुरालाई पुष्टि गर्दछ। अध्ययनमा, खोज ईन्जिनियरिङ्ले पत्ता लगाएको छ कि परिणाममा प्रदर्शित 86% फरक थियोविभिन्न इंटरफेसहरूको अनुसार।
मिथुन 3: चाँडै मानिसहरू चाँडै आफ्ना फोनहरूमा खोजी रोक्न सक्नेछन्किनकी उनि आफ्नो पहिरन योग्य उपकरणों मा खोज शुरू गर्नेछन्
सत्य: पहिरन सकिने यन्त्रहरूले हिउँले बजार ल्याएको छ, तिनीहरू परिष्कृत नभएको होइनन्उचित खोज गर्नका लागि उनीहरूको प्रयासमा। पहिरनयोग्य खोजी प्रविधिको लागि युग मात्र शुरुवात हो। Source .सिरी र गुगल गोगल्सहरू छन्क्रांति प्राप्त गर्न कोसिस गर्यो, तर बजार मा केवल 3% हिस्सेदारी मात्र छ, तर दिखा रहेको छ कि मान्छे पुरा तरिकाले पूरा नहीं गरेको छपहिरनयोग्य यन्त्रहरूमा खोजी गर्नका लागि आफ्नो मोबाइल यन्त्र खोजीहरू प्रतिस्थापन गर्ने विचार।
मिथक 4: मोबाइल एसईओ पनि एक कुरा होइन!
सत्य: धेरै मानिसहरू सोच्न चाहन्छन् कि मोबाइल एसईओ मात्र एक शब्द होबिस्तारै फेंकिएको छ। यो साँचो हो कि धेरै मान्छेले यो बुझ्न सक्दैन, र केही विशेषज्ञहरू वरिपरिका छन्। त्यहाँ धेरै व्यक्तिहरू छन्मोबाइल SEO को बारेमा गलत सोच्नुहोस्, तर यसको मतलब यो होइन कि एक गैर-अवधारणा अवधारणा हो जुन पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्न आवश्यक छ।
मिथुन 5: SEO एसईओ छ, र यो सबै हो
सत्य: नाप, नाप, नाप। SEO सबै समान छैन। स्थानीय एसईओ, मोबाइल एसईओ, र SEO को लागीवेबसाइटहरू डेस्कटप र ल्यापटप प्रयोगका लागि अप्टिमाइजेसन गरिएका छन् सबै समान छैनन्। चाँडै तपाईंले यो थाहा पाउनुभयो र तपाईंको साइटको लागि यसलाई ठीक छतपाईंले प्राप्त गर्नुपर्ने राम्रो रेटिङ र रूपान्तरण।
मिथ्या 6: एसईओ मोबाइल फोन र बसमा कन्फिगर गर्नुहोस् - मोबाइल एसईओ!
सत्य: हामी चाहन्छौं यो यो सरल थियो तर यो होइन। तपाईं वेबसाइटहरु को लागि एसईओ र दर्जा नहीं गरेर सकतेमोबाइल फोनको सट्टामा परिवर्तन गर्नुहोस्। मोबाइल SEO को लागि दृष्टिकोण वेबसाईट को अनुकूलन को लागि पूरी तरिका अलग छ। किनभने त्यहाँ धेरै छन्त्यहाँ मोबाइल यन्त्रहरूको विविधताहरू, मोबाइल एसईओ वेबसाइट एसईओ भन्दा बढी विशिष्ट र सटीक हुनुपर्छ। मोबाइल एसईओ बारे सिक्दैसमय र धैर्य चाहिन्छ, तर जब यो ठीक भयो, यसले तपाईंलाई राम्रो नतिजा ल्याउनेछ।
मिथ 7: एक अनुकूलित वेबसाइट बनाउनुहोस् र त्यसपछि मोबाइल फोनको लागि दर्जा गर्नुहोस्
सत्य: तपाईंको वेबसाइटलाई अनुकूलन गर्न सबै अनुकूलन गर्न अनुकूलन एक शानदार जस्तो लाग्न सक्छविचार। तथापि, तपाईलाई पनि विचार गर्न आवश्यक छ कि मान्छे अझै पनि पत्ता लगाउन सक्दिन कि तपाईको साइटबाट उनीहरूको आवश्यकता छ। वास्तवमा, 60% सम्ममानिसहरूले सँधै भेट्टाउँदैन कि उनीहरूलाई मोबाइल खोजहरूमा के चाहिन्छ। यो हुन्छ किनभने मोबाइल कार्यक्षमता सटीक छ र आवश्यक हुन आवश्यक छएक अलग इकाई को रूप मा विकसित र वेबसाइट को एसईओ रणनीति मा नहीं छोडे। उदाहरणका लागि, बीएमडब्ल्यू र अमेजनले हजारौं डलर खर्च गरेका छन्कठोर काम गर्दै उनीहरूको वेबसाइटहरू मोबाइल अनुकूलन छन् र मोबाइल एसईओ सही रूपमा लागू गरिएको छ।
मिथक 8: जब तपाई मोबाइल एसईओ प्रयोग गर्नुहुन्छ लिंकहरू लिन गाह्रो छ
सत्य: यो भन्दा सच्चै केहि पनि हुन सक्छ! वास्तवमा, सम्मानित साइटमालिकहरू वेबसाइटहरू जुन राम्रो एसईओ अभ्यासहरू लिङ्कहरू प्राप्त गर्न चाहन्छन्। त्यसैले नमस्ते Google, Mashable, र अन्यबाट लिङ्कहरू प्राप्त गर्न भन्नुहोस्प्राधिकरण साइटहरू।
हामी आशा गर्दछौं कि हामीले तपाईलाई केहि मोबाइल एसईओ मिथकहरुलाई टाँस्न र प्रकाश बहाइदिनु भएको छचीजको साँचो कुरामा।